Mayelana NATHI - Tspringwater Co., Ltd.
Sinikezela ngezingubo zezindwangu ezinjengezimpahla zokubhukuda, izimpahla zasebhishi, idizayini yokuhlanganisa, izingubo zangaphansi, izingubo zangaphansi ezi-Sexy, nezemidlalo zabesifazane, abesilisa nezingane. Futhi singenza izikhwama ezahlukahlukene ezinjenge-Climbing pack, i-Lunch Bag, i-computer bag.etc.
Ifektri yethu ayisebenzisi nje kuphela imishini yokuthunga esezingeni eliphezulu nezinqubo zobungcweti ukukhiqiza Izingubo, kodwa futhi isebenzisa abasebenzi abanolwazi.Ifektri yethu ingenza imikhiqizo engaphezu kwengu-2000 yenkampani eyodwa ye-Day.Our iphakela izembatho zemidlalo emazweni angaphezu kwama-65 kubathengisi abathembekile abangaphezu kuka-4,500. Asigcini ngokwenza insiza ye-ODM, kodwa futhi nensizakalo ye-OEM.
Ukuhlonipha amakhasimende, Ubuqotho, Ithimba kuqala
Umbono wenkampani: Dala imikhiqizo ethandwa kakhulu yezemidlalo emhlabeni
Ifilosofi yebhizinisi lenkampani: ukwethembeka, ukubambisana, isimo sokuwina, intuthuko!
Isimo senkampani: Inspirational, Healthy, Optimistic, Tolerant, Ukwabelana, Ubunye, Ukubonga.
Inhloso yenkampani: Dala inani lamakhasimende, uqaphele amaphupho wabasebenzi, uphumelele ezweni lomama, futhi wenze imizamo engapheli yokuzijabulisa bona nemindeni yabo.